Abenzi be-Dog Leash & Abahlinzeki | I-China Dog Leash Factory
Ileash yenja ehlehlekayo yenziwa ngentambo ethuthukisiwe yenayiloni engathwala ukudonswa okuqinile yizinja noma amakati kuze kufike kuma-44lbs ngesisindo.
I-leash ebuyiswayo ehoxiswayo ifinyelela ku-3m, ingathwala ukudonsa okufika ku-110lbs.
Le leash leja ehoqekayo ethengiswayo inesibambo se-ergonomic design, ivumela ukuhamba amabanga amade ngokunethezeka, futhi akukho ukukhathazeka ngokulimaza isandla sakho. Ngaphandle kwalokho, it'ilula futhi ayishebeli, ngakho-ke ngeke uzizwe ukhathele noma uvutha ngemuva kokuhamba isikhathi eside.
1.Impahla yeLeash Ehoxisekayo Yezinja Ezincane inobungani bemvelo, ayinabuthi futhi ayinaphunga. I-leash inikeza isikhathi eside sokusetshenziswa, futhi isiphethu esiqinile se-High-End senza ukuthi i-leash inwebe futhi ibuyele kahle.
2.Ukuhlala okuqinile kwe-ABS kunesibambo se-ergonomic ne-anti-slip, ithokomele kakhulu futhi iyanela entendeni yesandla sakho, ifaka isandla sakho njengegilavu. Umklamo wokulwa nesiliphu wezinja ezincane uqinisekisa ukuphepha, futhi uhlala ulawula izinto. 3.Sturdy yensimbi snap hook enamathela ngokuphepha collar isilwane noma amahanisi.